नयाँ युग : ‘पोल-पोलमा सरकार, टोल-टोलमा बलात्कार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली…!’ « News24 : Premium News Channel
काठमाडाैं । नेपाली एउटा उख्खान छ, ‘नम्बरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन ।’ तर त्यही नम्बरी सुनको विज्ञापन भने धेरै गरेको देख्छौँ । हो यस्तै भयो सरकारको ‘नयाँ युग’ पनि । नम्बरी सुन जस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला ‘नयाँ युग’ ।
सोमबार बेलुकीसम्म ‘नयाँ युग’ नसुनेका सर्वसाधारणले मंगलबार बिहानै बिजुलीको पोल-पोलमा नयाँ युग देख्दा चकित नै परे । सामाजिक सञ्जालमा मंगलबार बिहानदेखि नै नयाँ युगको आलोचना हुन थाले । विभिन्न व्यङ्ग्य गर्दै ‘नयाँ युग’लाई उडाउन सुरु भयो । सामाजिक सञ्जालमा ‘पोल-पोलमा सरकार, टोल-टोलमा बलात्कार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली…!’ भन्नेहरूकाे पनि कमि थिएनन् । सरकारले जुनसुकै कार्यक्रम ल्याए पनि अालाेचना नभएकाे त छदैँ छैन । पानीजहाजकाे कुराे हाेस् य त पाइपबाट ग्यस घरघरमा पुर्याउने याेनजना हाेस्, सबै कार्यक्रमकाे अालाेचना हुदैँ अाएकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार शब्दमा केही गर्न खोजेको देखिन्छ तर व्यवहारिकता कतै अल्झेको छ । चुनावी नारा र जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएका कुराभन्दा पनि नेता आफ्ना चाहाना, रहर र सुविधा परिपूर्ति गर्न उद्दत देखिएको कारण आलोचना भएको हो, जुन स्वाभाविक हो । जनताको चाहना र भावना बुझ्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । तर जनाले पनि कुरै नबुझी आलोचना गर्नु जनताकाे कम्जोरी हो । गणेशमान सिंहले भन्थे ‘नेपाली जनता भेडा हुन ।’ मलाई पनि कता-कता हामी भेडा जस्तै भएको भान भयो । ‘नयाँ युग’मा के-के कार्यक्रम छ? कस्तो कार्यक्रम छ ? त्यो नै थाहा नपाई विरोध गर्नुकाे के अर्थ ? त्यसैले गणेशमान सिंहकाे भनार्इ कता कता सहि नै लाग्याे ।
हाम्रो सोच कतै नकारात्मकै त भइसकेको छैन ? किन हामी नकारात्मबाटाे मात्रै साेच्छैँ ? अहिले चलिरहेको विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएकी सृखला खतिवडालाई सर्पोट गर्नुको साटो विरोध जनाउनेहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ । सृखला विश्व सुन्दरी बनिन् भने सम्रगमा नेपालले जित्ने छ । तर पनि विरोध चाहिँ किन ? हामीबाट कहिल्यै पनि नहट्ने भयाे ‘अरूको शरीरको जुम्रा चाहिँ देख्ने तर अफ्नाे शरीरको भाैसीँ नदेख्ने’ प्रवृत्ति । राम्रोसँग कुरा नबुझी नै ‘हो’मा ‘हो’ थप्ने बानी परेका हामी कति कुरा थाहा नपाई नै राम्रो र नराम्रो भनिरहेका हुन्छाैँ ।
नियमित तलब पाउन समेत संघर्ष गर्न बाध्य भएका श्रमिकका लागि यो आफैँमा एउटा ठूलो अवसर हो । सरकारले यस्तो कार्यक्रम घेषण गरेपछि श्रमिकहरू खुसीले गद्‌गद नै भएका छन् । त्यस अर्थमा श्रमिकका हकमा नयाँ युगको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । तर सरकारले ‘नयाँ युग’ घोषणा गर्दैमा हाम्रा दु:खको दिन गए भन्नु चाहिँ मूर्खता हो । कर्मचारीका लागि समयअनुसारको सेवा सुविधा मालिक वर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो । त्यसैले याे कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न चुनैति रहेको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
यस्तो राम्रो सम्झौता भएपछि सबै खुसी भए । तर कार्यन्वयनमा भने चुनैति अाएकाे छ । श्रमसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको एक महिनापछि आएर मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
मंगलबार सरकारले घोषणा गरेकाे कार्यक्रम पनि यस्तै लोकप्रिय छ । तर सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रचारका लागि ठूलो मात्र रकम खर्च गरेर घोषणा गरेकाले प्रचारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ‘समृद्ध मूलक, सुखी नेपाली’ नारा दिएको ओली सरकार याे घटनाले पनि थप आलोचित बन्न पुगेको छ । ।
श्रमिकका लागि यो साँच्चीकै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि घोषणा कार्यक्रममा सरकारले जुन किसिमको तामझाम गर्याे । यो देख्दा फेरि आशंका जन्मिएको छ । कतै सरकार प्रचारबाटै लोकप्रियता बटुल्ने झिनो अभियानमा लागेको त होइन ?
सरकार धेरै कुरामा पछि पनि हट्ने गरेको छ । एक बेला देशभरि सनसनी मच्चाएको साढे ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला हत्या प्रकरणमा भने सरकारपछि हटेको छ । चर्चित साढे ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान अलपत्र परेको छ । प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गुपचुप छ ।
गृहमन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई ३३ किलो सुनबारे थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन सुझाइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको चार महिना पुगिसक्दा पनि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीको कुनै निकायले पाएको छैन ।
सरकार पछि हटेको अर्को घटना भनेको निर्मला हत्या प्रकरण हो । कञ्चनपुरमा चार महिना अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेकी छैनन्। निर्मलाका बुबाले न्याय माग्दै मानसिक सन्तुलन गुमाउनु पर्याे। अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेडमा न्याय कुरिरहेका छन्। प्रदेश एकमा मात्रै एकमहिनामा तीन जनाको गोली हानी हत्या गरियो। त्यसको हत्यारा पत्ता लगाउन सकिएको छैन। आफन्तहरू अहिले पनि हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।